Pesdị azụmahịa kọmputa | ECommerce ozi ọma
na ebe ikpo okwu e-commerce A maara ha nke ọma na Spain, agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eche ịmepe otu n'ime ụlọ ahịa ndị a, ị ga-eche ọtụtụ ihe banyere ya. ụdị ahia nke a ga - eme site na ikpo okwu gị, ebe ọ bụ, dabere na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ụfọdụ ụdị azụmahịa nwere ike ịbụ nhọrọ ka mma iji nye ndị ahịa ma jikọta ụzọ kachasị mma iji jikwaa ma nyekwa azụmaahịa ahụ.
Ka anyị nyochaa nhọrọ nke ụdị e-azụmahịa na anyị nwere ike ịchọta n'ime ọtụtụ nyiwe na Spain.
Typedị nke mbụ anyị ga-enyocha bụ ịzụrụ otu; Na ndị a, na ngwaahịa na-awa na ụzọ abụọ, apụ, ọ bụ anyị ka anyị kpọmkwem ahịa; Agbanyeghị, ihe na - eme ka ọ dị iche na mma maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ na ọ bụrụ na achọtara otu ndị mmadụ ịzụta na nke ahụ ego ego ụlọ ahịa na-enweta; Nke a na-enyere onye nwe ya aka n’ihe gbasara ọnụ ahịa mbupu, maka na izipu ozi na adreesị dị iche iche, enwere ike iziga otu iwu na otu adreesị.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime azụmahịa igwe a na-eme ya na intaneti nke ulo ahia obula nwere uzo nke ya iji jeere ndi ahia ya ozi ụdị e-azụmahịa nke dabere na iji netwọk mmekọrịta iji kpọsaa ngwaahịa ahụ ma nwee ike kpọtụrụ ndị ahịa.
Nke ikpeazu ụdị e-azụmahịa anyị ga-ekwu maka ya bụ onye ga-ere ọgbọ na ibe, na nke a ụdị ndị ọrụ azụmahịa Ha na-enye ngwaahịa ha na ikpo okwu a na-ejedebe na-enye ebe mebere emepe maka ngwaahịa ndị a ga-enye, n'ọnọdụ ndị a, ikpo okwu na-enweta ego site na ụgwọ ndị edobere dabere na ụdị ngwaahịa na ụgwọ a na-ere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Edị e-azụmahịa
Ka anyị gbaa mmadụ niile ume ka ha sonyere e-commerce
E-azụmahịa na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe